“Heshiiska Cristiano uu ku joogo Juventus lama yaabayo” _ Halyayga reer Brazil Ronaldo – Gool FM
“Heshiiska Cristiano uu ku joogo Juventus lama yaabayo” _ Halyayga reer Brazil Ronaldo
(Yurub) 03 Jan 2019. Halyayga reer Brazil ee Luís Nazário de Lima Ronaldo ayaa xaqiijiyay in heshiiska uu Cristiano Ronaldo ugu dhaqaaqay kooxda Juventus uusan ahayn mid la yaab leh.
de Lima Ronaldo ayaa wareysi uu ku bixiyay “TuttoMercato” wuxuu kaga hadlay Cristiano Ronaldo wuxuuna yiri:
“Cristiano Ronaldo oo Juventus ah ma ahayn wax la yaab leh, sababtoo ah waxaan ku noolnahay kubada cagta, waxaana ka fileynaa wax walba, laakiin waa wax fiican sidoo kale in horyaalka Serie A aan kula aragno Carlo Ancelotti”.
“Mauro Icardi wuxuu noqday ciyaaryahanka ugu caansan Inter Milan, waa ciyaaryahan aad u muhiim ah, ma ahan wax sahlan in la iibiyo”.
“Inter wali wey soo kabaneysaa, halka Juventus ay tahay kooxda ugu xoogan Talyaaniga, xitaa hadii ay Napoli si fiican u shaqeyneyso”.
“Waan ku faraxsanahay Inter Milan xitaa haddii kooxda ay niyad jab ku tahay Champions League xilli ciyaareedkan, waxaana rajeyneynaa in kooxda ay si dhaqso ah u siin doonto taageerayaasha xoogaa farxad ah”.
“Luciano Spalletti si fiican ayuu u shaqeynayaa, xaaladuna waa horumar muuqata, waxaan rajeyneynaa wax badan ee mustaqbalka ah”.
Rashford oo tilmaamay talaabada xigta uu doonayo inuu qaado, si uu kooxdiis in badan u caawiyo